Uyifumana njani i-visa yokuya eArgentina? - ALinks
Uyifumana njani i-visa yokuya eArgentina?
January 10, 2022 UMaitri Jha Argentina, ivisa
IArgentina lelona lizwe lisemazantsi eMzantsi Melika. Lelinye lawona mazwe makhulu emhlabeni, ibiyelwe ngaphezulu kwesigidi esinye seekhilomitha. Kuya kufuneka ufake isicelo sevisa yokundwendwela iArgentina- ngaphandle kokuba uvela kwilizwe elikhutshelwe i-visa. Eli nqaku likuxelela malunga neendidi zevisa zaseArgentina, iimfuno, kunye nendlela yokwenza isicelo.
Xa ufaka isicelo sevisa, kufuneka uqokelele amaxwebhu axhasayo. Amaxwebhu owangenisayo axhomekeke kwinjongo yokuhamba. Kodwa, iseti esemgangathweni yamaxwebhu kuzo zonke izicelo zeVisa yaseArgentina kubandakanya:
Ifom yesicelo eArgentina Visa kufuneka izaliswe kwaye isayiniwe.
Unokuzikhuphelela kunye nefom yesicelo kwiwebhusayithi yobambiso.
Ipaspoti yakho kufuneka isebenze ubuncinci ezinye iinyanga ezintandathu. Iqala kumhla ojonge ukuya eArgentina. Kwakhona, kufuneka okungenani ibe namaphepha amabini angenanto.
Iifotokopi zepaspoti (kwaye ukuba ziyafuneka, iipasipoti zangaphambili nazo). Ukubonisa iinkcukacha zobuqu kunye naziphi na ii-visa zangaphambili.
Imifanekiso emibini yakho, eneenkcukacha ezilandelayo:
I-4cm x 4cm, imvelaphi emhlophe, abeBala, kufuneka ukuba ibe yeyangoku, imbonakalo yobuso engathathi cala.
Buyisa amatikiti endiza
Ubungqina bokuba unayo nayiphi na indawo yokuhlala / indlu yokuhlala eArgentina
Ubungqina beendlela ezoneleyo zokuhlawula ixesha lokuhlala kwakho. Ukujonga ezakho kwiingxelo zebhanki.
Iimfuneko zeVisa yabakhenkethi eArgentina
Masithi ufake isicelo seVisa yabakhenkethi eArgentina. Kufuneka ube nala maxwebhu alandelayo afunekayo ukongeza kula maxwebhu angentla:
Ubungqina bokubhukisha ihotele. Faka ileta yesimemo evela kumphathi wakho ukuba uhlala nelungu losapho lwakho okanye abahlobo. Ileta kufuneka iqinisekiswe kwaye ibhaliswe ngokusemthethweni ngummeli notary kwaye ikhatshwe sisazisi sombuki zindwendwe.
Amaxwebhu anxulumene nenqanaba lakho kwingqesho:
Ileta evela kumqeshi wakho eqinisekisa ingqesho yakho kwinkampani. Uzokungabikho ixesha elingakanani, kunye nomvuzo wakho xa uqeshiwe.
Ileta evela esikolweni sakho, eqinisekisa ubhaliso lwakho, iinkcukacha zekhosi.
Ukubhaliswa ngokusemthethweni kweshishini lakho okanye ubungqina bokubuyiswa kwerhafu.
Izidingo zeVisa yoShishino eArgentina
Ukongeza kumaxwebhu angentla, xa usiya eArgentina kwishishini. Uyawafuna la maxwebhu alandelayo:
Ileta yesimemo, eyintsusa kunye nekopi, evela kwinkampani yaseArgentina
Ileta evela kumqeshi wakho ichaza ukuba ukuhambo lweshishini kunye neenkcukacha zomsebenzi wenkampani yakho.
Iimfuneko zeVisa zomsebenzi eArgentina
Amaxwebhu ekufuneka uwahambisile ukuba undwendwela iArgentina. Ukuba ufumene ingqesho yexesha elide zezi:
Isivumelwano sengqesho, esisayinwe ngumqeshi waseArgentina. Inenombolo yobhaliso yenkampani eqeshayo. Kuyimfuneko ukuba isivumelwano sibe semthethweni kwaye sibhalwe phantsi.
Isatifikethi serekhodi yolwaphulo-mthetho, esikhutshwe kwilizwe lakho ngabaphathi bamapolisa. IDiploma / iikopi zakho zesatifikethi.
Iimfuneko zeVisa zabafundi eArgentina
Amaxwebhu ongezelelweyo owafunayo xa usiya eArgentina ukuya kwenza izifundo zezi:
Ubungqina bokubhalisa kwiziko lakho lemfundo.
Ubungqina benkxaso mali eyoneleyo yokuhlawula ukuhlala kunye nezifundo.
Isatifikethi serekhodi yolwaphulo-mthetho, esikhutshwe kwilizwe lakho ngabaphathi bamapolisa.
Iimfuneko zeVisa yoSapho eArgentina
Amaxwebhu angaphezulu owadingayo xa usiya eArgentina. Ukujoyina ilungu losapho esele lihlala apho:
Ubungqina bobudlelwane bosapho njengoko kufanelekile, njengomtshato okanye isatifikethi sokuzalwa.
Ikopi eqinisekisiweyo yesazisi selungu losapho (DNI) eArgentina
Ngaba uyayifuna ivisa yokuya eArgentina?
Kuvumelekile kubemi bamazwe angama-87 ukuba bangene eArgentina ngaphandle kokundwendwela okanye ukungabikho kwvisa. I-United States, iSouth Korea, i-Australia, iBrazil kunye ne-Turkey ngamazwe angenaz visa. Iintlanga ezingenaz visa zihlala eNyakatho Melika, eYurophu, eMzantsi Afrika nase-Australia. Uya kudinga i-visa ukuba uhlala e-Afrika okanye kwi-Asia eseMbindini.
IArgentina ivumela amazwe amaninzi ukuba afumane i-ETA okanye iSigunyaziso sokuHamba nge-Elektroniki. EArgentina, i-ETA / AVE ifuna ukuba ube ne-US B2 okanye iSchengen visa. I-US B2 okanye iSchengen visa kufuneka isebenze ngaphezulu kweenyanga ezintathu. Ukulungiselela ukhenketho kuphela, i-ETA / AVE ilungile. Ukufaka isicelo se-visa ye-ETA yase-Argentina kwi-Intanethi, kuya kufuneka ugcwalise amaxwebhu akho.
Le nkqubo ilula kakhulu kuba inokukugcinela iitoni zexesha kwi-intanethi.
Amazwe abemi belizwe abakulungeleyo ukugunyazwa ngohambo lwe-elektroniki ukusuka eArgentina ngala:
Alibhaniya Angola Antiguwa neBarbuda Bhahamas Bhareyini Belize
Benin Bhutan Bhozniya neHerzegovina Botswana Burkina Faso Burundi
Khambodiya Khameruni Kheyip Verde ICentral African Republic Tyhubha IDemocratic Republic Of Congo
Jibhuti Dominikha ilizwe lasedominic Ekhwithoriyal Gini Eritrea Eswatini
Yuthophiya Gabon IGambia Ghana Guinea Guinea-Bissau
Indiya Indoneshiya Ivory Coast Khenya Kiribati iLaos
Lesotho Madagaska Malawi Maldivs Isiqithi saseMashal Mauricio
iMoldavia Mozambikh Myanmar Namibhiya Nauru Nephal
Nayija Oman Palau Gini eNtsha yasePapuwa Filipayinzi Iriphabliki yaseTshayina
IRiphabhlikhi yaseCongo Rwanda Samoa Sawo Tome nePrinsipe Senegal Seytshels
Sierra Leone Isiqithi saseSolomon Thanzaniya Togo Tonga Tuvalu
Uganda Vanuatu Vietnam Zambiya Zimbabwe
Abemi abasebenza ngokusemthethweni kwi-ID yabo yokungena eArgentina
Ungafikelela eArgentina ngesazisi sakho kuphela ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-90 ukuba uvela kwelinye lala mazwe alandelayo:
Chile - eChile
EPeru - ePeru
Abemi abafuna ukugunyazwa ngohambo
Ngaphambi kokuba bangene eArgentina, abemi bala mazwe alandelayo. Kufuneka ufake isicelo soGunyaziso loKhenketho kwimishini efanelekileyo yozakuzo eArgentina:
IRiphabhlikhi yase-Arab yeDemokhrasi yaseSahrawi
Iindidi zeeVisa zaseArgentina
Iivisa zaseArgentina zezintlobo ezimbini:
IiVisa zeXesha elifutshaneIkwabizwa ngokuba yiVisa yabakhenkethi yaseArgentina). Olu hlobo lwevisa lunokufunyanwa emva kokufika eArgentina. Kwi-Consulate yase-Argentina kwilizwe lokuhlala. Okanye kwiofisi yokufudukela eArgentina.
Iivisa zexesha elideIkwaziwa njengeevisa zokuhlala. Abasebenzi abaNikwe ikhontrakthi-Indawo yokuhlala yeVisa yexeshana iyafuneka ukuze usebenze ixesha elide. Yenzelwe abantu bamanye amazwe abaqeshwe eArgentina. Okanye basebenza kuyo nayiphi na inkampani okanye abo benza umsebenzi woqeqesho.
IiVisa zokuHlala kwakhona eArgentina (ii-visa zexesha elide)
Iivisa ezinde, ezinikwe abantu bangaphandle abafuna ukumisela indlu eArgentina. Iindidi eziqhelekileyo zeevisa zokuhlala eArgentina zezi:
Work Visa: Ithunyelwe kubaphambukeli abafumene umsebenzi eArgentina. Umqeshi wakho unokucwangcisa imvume yokusebenza egameni lakho.
Qaphela: Ekufikeni eArgentina. Abaqeshwa kufuneka benze isicelo seDNI / iNcwadi yeSazisi yeSizwe. Kwaye i-CUIL / iKhowudi yokuchongwa koMsebenzi eyahlukileyo, nayo.
Visa yabafundiNgubani ofuna ukuqhuba izifundo zakhe kwiziko laseArgentina. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda unxibelelane ne Umcebisi nge-IES phesheya.
I-Visa yoSapho yaseArgentina: Oku kwenzelwe abo bafuna ukujoyina ilungu losapho olusondeleyo. Okanye ngubani ummi okanye umhlali osisigxina eArgentina? Izicelo ze-visa yosapho zinokuthunyelwa kwiArgentina IOfisi yommeli. AIndawo ahlala kuyo umntu welinye ilizwe.
Zithini iimfuno zeVISA zokundwendwela iArgentina?
EArgentina, iimfuno ze-ETA / AVE zibandakanya la maxwebhu alandelayo:
Ipasipoti yakho esebenzayo kufuneka isasebenza kangangesithuba seenyanga ezi-6 ukusukela kumhla wokufika kwakho eArgentina.
I-US B2 / iSchengen Visa:
Uya kudinga ukuba ube ne-US B2 visa okanye i-visa yeSchengen ukuze ufumane i-ETA / AVE. Ngenisa izikali kunye nesicelo sakho malunga noku.
Ngaba izicwangciso zakho zokuhamba zikulungele ukuboniswa kumagosa okungena. Kwakhona kubandakanya xa ushiya iArgentina.
Ulwazi ngendawo yokuhlala:
Abasemagunyeni kwezokuhamba eArgentina bafuna ukwazi ukuba unendawo yokuhlala. Kwaye unokuzixhasa ngelixa useselizweni.
Uhlobo lokuhlawula-Ukuze uphume, uya kudinga ikhadi lekhredithi / ledebhithi okanye iakhawunti yePayPal.
Ngawaphi amaxesha okulungisa i-ETA / AVE ARGENTINA "VISA"?
Ukukunceda ufumane indawo yakho ye-ETA ngokukhawuleza, sinezantya ezintathu zokulungisa:
Kuya kuthatha ukuya kuthi ga kwiintsuku ezili-16 ukulungiselela ukuqhubekeka komgangatho.
Kuya kuthatha ukuya kuthi ga kwiintsuku ezili-13 ukuba kwenziwe inkqubo engxamisekileyo.
Kuya kuthatha ukuya kuthi ga kwiintsuku ezili-10 ukuqhubekekisa ukuSebenza okuKhawulezayo okungxamile
Yintoni indleko ye-ETA / AVE evela eArgentina?
Ngokusekwe kwisicelo sakho sokukhawulezisa ukusebenza, iindleko zizonke ze-ETA yakho yeArgentina iyahluka.
Inketho yokuSebenza okuMgangatho iya kuzisa iindleko zizonke kwi-USD 85.00.
Ukukhethwa kweRush Processing kuya kuzisa iindleko zizonke kwi-115.00 USD.
Ukhetho lwe-Super Rush Processing luya kuzisa iindleko ngokubanzi kwi-USD 150.00.
Kuya kufuneka ufake isicelo sokundwendwela kwilizwe lase-Argentina kwilizwe lakho, njengommeli wozakuzo. Inkqubo yokwenza isicelo:
Misela ixesha kunye Ummeli waseArgentina.
Qokelela onke amaxwebhu afunekayo kwaye uhlawule umrhumo we-visa
Ngenisa amaxwebhu kwaye ubekho kudliwanondlebe lwe-visa
Inkqubo yesicelo iyatshintsha ngokuxhomekeka kwilizwe ohlala kulo. Kungenxa yoko le nto inyathelo lokuqala kukunxibelelana nomsebenzi wobume bezopolitiko waseArgentina. Ndwendwela iwebhusayithi yabo ukuze ufunde malunga nemigaqo yokungeniswa kwesicelo. Ezinye iiofisi zoonozakuzaku zinokuvumela ukuba ungenise onke amaxwebhu ngeposi.
Kuthatha ixesha elingakanani ukwenza i-visa eArgentina?
Ixesha lokulungiselela i-visa lixhomekeke kumzi wommeli othile apho ufake khona isicelo. Abanye oonozakuzaku bathembisa ngokuqhubekeka i-visa kwiveki enye, ngelixa abanye bezakuthatha. Kuya kufuneka ufake isicelo seVisa yaseArgentina ubuncinci kwiintsuku ezingama-45 ngaphambi kokuba uzimisele ukuhamba. Nceda ubhalele iCandelo loMmeli lizwe kwi secon_eindi@mrecic.gov.ar.
Lithini ixesha lokundwendwela elivela eArgentina?
I-visa yaseArgentina isebenza iinyanga ezintathu. Ivumela ukungena okuninzi elizweni. Ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-90, unokuhlala kweli lizwe.
Masithi ufuna i-visa yeenjongo zexesha elide njengokufunda kunye ne-visa. Ukuba uza kuhlala ixesha elingaphezu kweentsuku ezingama-90, kuya kufuneka ufumane imvume yokuhlala usakufika.
Ngaba ungayandisa i-visa yakho ukuya eArgentina?
Ewe. Ewe unga. Kuya kufuneka ufake isicelo kwiofisi yokufudukela eBuenos Aires. Ufumana ulwandiso lweVisa yakho yabakhenkethi yaseArgentina kwezinye iintsuku ezingama-90. Kwaye uhlawule umrhumo wolwandiso olufanelekileyo.
Ufaka phi isicelo sokundwendwela usuka eArgentina uye eMelika?
Ukuba uhlala eMelika, kodwa awunguye umhlali waseMelika. Unokufaka isicelo sokundwendwela eArgentina kwimishini yoonozakuzaku baseArgentina eMelika. Bazi:
Umzi wozakuzo waseArgentina eWashington
Ummeli waseArgentina eAtlanta
Ummeli waseArgentina eChicago
Ummeli waseArgentina eHouston
E-Los Angeles, i-General Consulate kunye ne-Promotion Hub yase-Argentina
EMiami, i-General Consulate and Promotion Hub yaseArgentina
ENew York, iGeneral Consulate and Promotion Hub yaseArgentina
Umsebenzi osisigxina waseNew York waseArgentina
EWashington, uMsebenzi osisigxina waseArgentina
Ukucela ukuqeshwa nge-imeyile. Kufuneka uqale uqhagamshelane ne-diplomatic mission. Kwiiwebhusayithi zabo, unokufumana iinkcukacha zonxibelelwano kwimishini nganye yezopolitiko.
IVisa eArgentina yaBantu baseIndiya
Ngaphambi kokuba baye eArgentina, abantu baseIndiya kufuneka bafake izicelo zokundwendwela. Njengommi waseIndiya, kufuneka ufake isicelo seVisa kwimishini yozakuzo eIndiya isuka eArgentina, efana:
Icandelo le-Consular ye-Embassy yaseArgentina eNew Delhi
I-Consulate General yase-Argentina eMumbai
argentina e-visa kwi-intanethiiArgentina eta visaImirhumo yeVisa yaseArgentina yamaIndiyaI-visa yaseArgentina ekufikeni kwendiyaIindidi zeVisa zaseArgentina
Ungayifumana njani i-visa yokundwendwela eSaudi Arabia?
Oktobha 10, 2021
Amazwe asimahla eVisa eGhana
I-visa yaseTurkey yabemi baseTshayina: isikhokelo esifutshane
Visa kumazwe asimahla kwiRiphabhliki yaseCzech